အတွက်ရက်စွဲတစ်ခုလားဒ္အတွက်အလေးအနက်ဆက်ဆံရ - ဗီဒီယိုစကားပြော№၁-ဗီဒီယိုချိန်းတွေ့နှင့်အတူမိန်းကလေးများအြန္လိုင္း
အဖော်လိုက်ဖက်ပြဇာတ်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍ။ သင်တစ်ဦးချိန်းတွေ့ဆိုက်ကူညီလိမ့်မည်သင်သည်အတွေ့အမှန်တွေ့န်ဆောင်မှု၊နှင့်အတူတစ်ဦးဆက်ဆံရေးအရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လိမ့်မည်အများဆုံးထိုးထိုး။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုက်ကိုပြသလိုက်ဖက်သောသင်တို့ဥစ္စာဖြစ်သူလူတိုင်းအတွက်သည်သင်တို့နှင့်အတူအရှင်ထားရန်အလေးအနက်အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ဆက်ဆံရေးအတွက်အသစ်တခုအဆင့်၊နှင့်အားလုံးသောဝန်ဆောင်မှုများကိုပူဇော်ကြသည်ဆိုက်ပေါ်တွင်အခမဲ့။ ။ ၅၀ အသက်အနှစ်။ မရှည်လွန်ခဲ့တဲ့၊သူ၏အဆိုး ရွှင်လန်းထီးဟာသကဆု။ ရှာတွေ့ခြင်းငှါအလိုအကောင်းတစ်ဦးအမျိုးသမီးများအတွက်အသက်တာ၏မေတ္တာနှင့်အပြန်အလှန်။။။။။ သားသမီးမဟုတ်အတားအဆီးတစ်ခု။ မျိုးမုန့်လူတိုင်းအတွက်။ ကျွန်တော်တို့လိုအပ်နေတဲ့လူတစ်ဦးကဲ့သို့ ၅၂ နှစ်အထဲက ၄၀။ ကောင်း:စိတ်ချယုံကြည်၊အကြီးတန်းထောက်လှမ်းရေးသည္။ မင်္ဂလာပါ။ ကျနော်တို့အလှမောင်ရုပ်ရှင်၊၃၅ နှင့် ၃၇။ ကျနော်တို့အတူတကွနေထိုင်အတွက် ၅ နှစ်ပေါင်း။ ကျနော်တို့နှစ်ဦးစလုံးအပေါ်စီစဉ်ရှိခြင်း။ ဒီလိုလုပ်ဖို့၊ကျနော်တို့အဘို့အရှာဖွေနေတစျခုအရာ:က်န္းမာေရး၊လေ့ကျင့်ခန်း၊မကောင်းတဲ့အကျင့်စရိုက်၊အသိပညာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့်အတူ၊အဆင့်မြင့်ပညာရေး၏။ အားလုံးအခြားအသေးစိတ်တွေ့နိုင်ပါသည်နှစ်ခုလုံးအတွက်စာပေးစာယူနှင့်လူတစ်ဦးအတွက်။ ငါလိုချင်တာကိုဖြည့်ဆည်းဖို့တစ်လျောက်ပတ်သောလူတစ်ဦးခြင်းမရှိဘဲ၊မကောင်းတဲ့အလေ့အကျင့်၊ဖြစ်နိုင်ရင်နှင့်အတူဟောင်းတစ်ဦးစစ်ရေးယောက်ျားနိုင်ရန်အတွက်စတစ်မိသားစု။ အားလုံးမင်္ဂလာပါ။ ကျွန်မဟာသာမန်လူတစ်ဦးနှင့်အတူသာမန်လိုအပ်ချက်နဲ့အလိုဆန္ဒ။ မချိန်အများကြီးဖြုန်းအပေါ်။ ရေးသားဖို့ငါ့ကို၊ငါကျိန်းသေတုံ့ပြန်သူတို့အားအဘယ်သူကိုနှင့်အတူသူတို့အပြန်အလှန်ရှိနာနှင့်ဘုံအကျိုးစီးပွားကိုကျနော်တို့ဖြည့်ဆည်းကြလိမ့်မည်နှင့်သင်သူတို့ထဲကတစ်ဝက်လောက်က -ဤချိန်းတွေ့အတွက်ဗဟိုနှင့်အတူလိုက်ဖက်၊နှင့်အခွင့်အလမ်းရှာတွေ့ဖို့အတွက်တိရစာန်-အင်တာနက်ကနေတဆင့်။ အားလုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့ချိန်းတွေ့န်ဆောင်မှုကိုကမ်းလှမ်းနေကြတယ်လုံးဝအခမဲ့။ တစ်ခုတည်းသောအလေးအနက်ဆက်ဆံရေးနှင့်လက်ထပ်ထိမ်းမြား။.
Bezmaksas goodbye uz.
ဗီဒီယိုချက်တင်နှင့်အတူမိန်းကလေးငယ်များအခမဲ့မရှိပါ အဘို့အတွေ့ဆုံရန်အစည်းအဝေး ဗီဒီယိုချိန်းတွေ့နှင့်အတူမိန်းကလေးစကားပြောမပါဘဲမှတ်ပုံတင်ခြင်း ချိန်းတွေ့နှင့်အတူဖုန်းနံပါတ် ဗီဒီယိုစကားပြောမပါဘဲတက်လက်မှတ်ထိုးနှင့်အခမဲ့မိန်းကလေးများ ချက်တင်ကစားတဲ့အခမဲ့အွန်လိုင်း ချိန်းတွေ့ဝန်ဆောင်မှု ချက်တင်ကစားတဲ့ ၁၈ မပါဘဲမှတ်ပုံတင်ခြင်း ဗီဒီယိုအခမဲ့စကားပြောခန်း ၁၈ အဝတ်အချည်းချိန်းတွေ့ဗီဒီယိုများ